​मान्छे छिर्दा दूतावास मर्माहत
Monday, 8 Jan, 2018 9:56 AM
बर्मा गए कर्मसँगै... भनेझैं नेपाली समुदाय विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि पुरानो रोग उस्तै छ । पछिल्लो दृष्टान्त हो, नेपाली समाज टेक्सासको चुनाव । केही पैसावालाको चेपुवामा समाज विभाजित हुन पुग्यो । मतदान गर्नु एक दिनअघि सुमन थापाको टोली निर्विरोध भयो । केही समयअघि एनआरएनको निर्वाचनमा हार खेपेका व्यापारी पासाङ शेर्पा र संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौं ३ बाट अम्बिका बस्नेत हारेपछि टेक्सास फर्केका अर्का व्यापारी हरिबोल भण्डारीबीचको टकाराव टेक्सासको निर्वाचनमा देखियो ।
निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहँदा मैदानमा देखिएका एक पक्षले मैदान छाड्नु र अर्को पक्षले विजय जुलुस निकाल्दै हिमालयन अरोमा रेष्टुरेण्टमा रात्रिभोज गर्नु संयोग मात्र होइन, सामान्य संस्थामा किन यत्रो लोभ भन्ने कुरा चुरो त्यहाँस्थित नेपाली मन्दिरको नाममा मानव तस्करी गर्नु नै हो । यस्तो कुकर्म टेक्सास मात्रै होइन कि अमेरिकाको अन्य राज्यमा पनि छ । यसअघि पनि मन्दिरमा समर क्याम्प चलाउने नाममा नेपालबाट योगी चिन्तामणिलाई बोलाउने र सहयोगीका नाममा प्रत्येक पटक ४÷५ जनाका दरले आफन्त वा रकम लिएर मानिसहरू बोलाउने गरिएको थियो । लगातार ३ पटक योगी समर क्याम्प चलाउने नाममा आएपछि दूतावासले मानव तस्करी गरेको भन्दै उनलाई तीन वर्षसम्म भिसा दिएन । यसपालि पनि चार जना ल्याइएको चर्चा छ ।
नेपाली हिन्दू मन्दिर बनाउन १० हजार डलर चन्दा दिएका ६० जनाभन्दा बढी समाजसेवीको सूचीमा न सुमन थापा छन् न त पासाङ लामा ! सुमनको टिममा रहेका कसैले पनि मन्दिरलाई चन्दा दिएका छैनन् । एक साताअघि मात्रै संस्थाले दिएको पैसा फिर्ता लैजान शेर्पाले अह्राएपछि थापा विवादमा आएका छन । शेर्पाले चुनाव हारेपछि आफ्नो अफिससंगै रहेको बेडफोर्डमा गुम्बा सञ्चालन गर्दै तिब्बतीयन शरणार्थीका नाममा थुप्रै नेपाली अमेरिका ल्याएका बताइन्छ । शेर्पा भएकै नाममा चुनाव हारेपछि उनले त्यसलगत्तै बाहुनकी छोरी बिहे गरेका हुन् । यसअघि डा. मुरली अधिकारी, कृष्ण लामिछानेहरूले मन्दिरका नाममा थुप्रै आफन्त अमेरिका भिœयाएको चर्चा छ । कुनै बेला नेपाली समुदायका लागि अभिन्न साथी बनेको संस्था एकाएक विवादमा आएपछि यतिखेर शून्यता छाएको छ । यस्तो घृणित कार्य भएपछि नेपालीहरू मन्दिर जान पनि हिच्किचाउने भएका छन् ।
​विवेक न साझा, कसरी हुन्छ ताजा ?